INDLOVUKAZI IYE EKHAYA | Scrolla Izindaba
INDLOVUKAZI IYE EKHAYA
Intokazi yokuqala eNingizimu Afrika uShudufhadzo Musida uvakashele isifundazwe sangakubo okokuqala selokhu yagcotshwa njengo-Miss South Africa 2020 ngoMfumfu.
‘Ukuziqhenya nentokozo yase-Limpopo!’ Kwamukelwe uNdunankulu wesifundazwe uChupu Mathabatha kanye noNgqongqoshe abambalwa kanye nezimeya kubandakanya neMeya yesifunda i-Vhembe lapho kutholakala khona i-Ha-Masia, okuyisigodi avela kuso.
Izinkundla zokuxhumana bezigcwale izincomo zezingubo zakhe ebezenziwe ngumsiki wengqephu odumile uGert-Johan Coetzee kanye ne-Imprint ZA.
UShudu, njengoba ebizwa kanjalo ngabalandeli bakhe, ubephethe ngisho nesivikeli sobuso esikhethekile ebesihambisana nengubo yakhe.
UShudu uthe kuthathe isigodi sonke ukumfikisa lapho ekhona futhi umndeni wakhe uyaziqhenya ngaye.